Askar American Ah Oo Lagu Dilay Weerar Ka Dhacay Bariga Dalka Afghanistan. – Calamada.com
Askar American Ah Oo Lagu Dilay Weerar Ka Dhacay Bariga Dalka Afghanistan.
Wararka ka imaanaya Dalka Afghanistan waxay sheegayaan in Seddax Askari oo Mareykan ah inay ku dhinteen weerar xooggan oo ay qaadeen Ciidamada MujaahidiintaÂ Imaarada Islaamiga Afghanistan.
Weerarka waxa uu billowday markii Ciidamo ka tirsan Mujaahidiinta oo si aad ah u hubeysan ay garneello iyo Sawaariikh ku garaaceen Saldhig Meliteri oo kuyaalla Mandiqadda lagu magacaabo Kamberi-Daak ee Gobolka Luqmaan, iyadoona howl-galkaasi uu sababay khasaare nafeed oo soo gaaray Ciidamada Dowladda Saliibiyada ee Mareykanka ee xoogga ku jooga Dalka Afghanitan.
Howl-gal kale oo ka dhacay Gobolka Konar ee isla bariga dalkaasi ayaa waxaa ku dhintay 10 Askari oo ka tirsanaa Ciidamada gaarka ee Xukuumadda daba dhilifka ee Afghanisan.
Qoraal lagu daabacay Barta Internetka ee Imaarada islaamiga ah ee Afghanistan ayaa waxaa lagu sheegay in dagaalkaasi uu qarxay kadib markii Ciidamada gaarka ah ee Xukuumadda daba dhilifka oo wata diyaarado Helicopters ah ay kusoo dageen deegaankaasi, si ay u furaan waddo istaraatiiji ah oo ay maamulaan Mujaahidiinta, waxaana halkaas ka dhacay iska hor imaad xooggan oo dhaliyay khasaare lixaad leh oo soo gaaray Maleeshiyaadka daba dhilifyada.
Geesta kalena Sideed Askari oo iyaguna ka tirsanaa Ciidamada gaarka ah ee Xukuumadda Kaabuul ayaa ku dhintay iska hor imaad ka dhacay Gobolka Nangahaar ee Dalka Afghanistan.
Dagaalyahannada Mujaahidiinta Daalibaan ayaa ka hortagay howl-gal habeenimo ah oo si wadajir ah ay u fulinayeen Ciidamada Mareykanka iyo kuwa Xukuumadda, kuwaas oo beegsanayay guryo ku yaalla degmada Jabar-haar ee Gobolka Nangahaar ee bariga dalka Afghanistan.
Imaarada islaamiga ah ee Afghanistan ayaa sii kordhisay weerarrada iyo howl-gallada Meliteri ee ay ka fuliso gobollada kala duwan ee dalkaasi, waxayna todobadyo kahor ayÂ ku dhawaaqday xamloÂ dagaalkeeda xilliga Guâ€™ga, taasi oo ay ugu magac daray howl-gallada Al-Cumariya.
Previous: Dhageyso Barnaamijka Faafreebka Wararka Andalus 08-08-1437 Hijri.
Next: Dhageyso Warka Subax Ee Andalus 08-08-1437 Hijri.